Sida loo dayactir ID3 Tags tayo leh, "update kuwan raadkaygay artist, tirada, horyaalka, sifayn iwm
Sida loo dayactir ID3 Tags tayo leh, Tracks Update 'artist, Lambarka, Title, sifayn iwm
Si aad u hesho faahfaahin sax ah oo ku saabsan track ama song si toos ah oo khilaafsan mp3 tags Sixidda waa wax in codadka warbixin buuxda midig, waa hawl fudud. Haddii aad tahay qof in si joogto download tuulmooyinkii music iyo inta badan nuqul koobab, meel faahfaahin sax ah oo ku saabsan wadooyin ama kuwan raadkaygay mysteriously baaba'aan, ka dibna waxa ay tahay in ay ka gudbaan maskaxdaada waa ID3 tags hagaajin. Waxaa jira qalab badan oo ah in uu noqon karaa mid aad u faa'iido badan ee ID3 tags baaraandegidda si toos ah ay qamaar iswaafaqla'aan ka. Waxaad u cusbooneysiin karaa kuwan raadkaygay 'artist, tirada, horyaalka, sifayn iwm Waxaa jira qalab badan oo karo ID3 tags hagaajin laakiin maqaalkan diiradda saari doonaa laba kaas oo caadi ahaan loo isticmaalo.
Qaybta 1.Fix tags ID3 aad MP3 ururinta ee Lugood Apple
Qaybta 2.Fix ID3 Tags tayo leh la TunesGo
Qaybta 1.Fix ID3 Tags ee Your MP3 Collection in Lugood Apple
Ka hor inta la isticmaalayo Lugood aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo oo ku xidh. Ka dib marka aad si guul leh ku samayn tan, ka dibna aad diyaar u tahay in ay tagaan!
Photo 1: tags ID3 aad MP3 ururinta ee Lugood Apple dayactir
Lugood ayaa awood u lahayn maaraynta ay database u gaar ah, sidaas darteed, macluumaad aan la isla markiiba xoojiyaa. Tallaabada ugu horreysa ee halkan waa in ay doortaan tareenka ama heeso maktabadda ka dibna tubbada ah 'Hel Info'. By midig magcaabo, waxaad yeelan doontaa doorasho ah ee ka bedelayaan folder oo ka mid ah wadooyin cad soo xulay. Waxaad magaca kara kuwan raadkaygay 'ku sifayn, artist, magaca iyo sidoo kale album. Dhig magacyada aad rabto! Sidoo kale waxaad magaca karaa track kasta ama song by socda tallaabooyinka kor ku xusan.
Photo 2: Lugood Window, dayactir tags ID3 aad MP3 ururinta ee Apple iTunes
Photo 3,4: bedelayaan tareenka ama Playlists & Fields Kale
Ku darista Album Art / Logo
Lugood marnaba dari farshaxanka si toos ah. Hawsha in si fudud la samayn karaa by Lugood Art soo dejiya. Waxaa Iyada oo aad si fudud ku dari kartaa images album ama haddii aad u baahan tahay in aad ku darto images aad door bidayso ama sawiro. Si kale oo caadi ah in arrintan loo sameeyo waa ay siyoodba (Control + Riix) ama si fudud xaq magcaabo ka dibna dooran farshaxanka ama Guda inay ka dibna ku dar ka jaftaa 'Hel Info' ka dibna tubbada 'DAR'. Si loo badbaadiyo isbedel ku dhufo "Ok '
Photo 5: darista Images / Photos / Arts
Soo saarida tus
Baabi'inta tus waa mid fudud haddii tags lagu shanleynayaa. Laga soo bilaabo menu Edit ah, ka jaftaa 'Songs Show nuqul' oo dhan oo iyaga ka mid la soo bandhigi doonaa. Halkan, iska samayn kartaa raad kala duwan leh magacyada ama lambarada la mid ah. Just ka jaftaa 'tirtirto' in laga takhaluso iyaga ka mid ah.
Tunesgo waa qalab fiican ee ID3 tags wax ku ool ah si qamaar gaar ahaan kuwa dadka waawayn ay yihiin kuwa khaati faahfaahinta ID3 joogto ah ka maqan playlists ama tareenka. Waxa ugu fiican oo ku saabsan barnaamijkan waa in aad sidoo kale u isticmaali kartaa sida ciyaaryahanka. Waxaad si raaxo leh ka ciyaari kara ama dhageyso heesaha waxaa via. Dhab ahaantii, tani waa hawl aad u fudud oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa inay raacaan talaabooyinkan.
Booqo website-ka rasmiga ah ee Tunesgo ka dibna dejisan iyo rakibi barnaamijka. Degsado iyo ku rakibidda qaadan doonaa oo kaliya dhawr daqiiqadood.
Fur barnaamijka. Marka taasi la sameeyo, maktabadda Lugood waxaa la marsiiyey isla markiiba. Dhammaan playlists ama kuwan raadkaygay waxaa lagu soo bandhigaa in saxaarad file. Photo 6: Bilaabanaya Tunesgo ka
Dejinta heeso ama wadooyin laga heli karaa fayl deegaanka. Tani waxay si fudud lagu samayn kartaa adigoo gujinaya 'My Music' ka dibna jiidi oo hoos u folder taas oo ka kooban xulay kuwan raadkaygay in ay soo gudbiyaan saxaarad. Photo 7: Tracks Doorashada
Ku bilow u qardarin ee ID3 tags. Hawlgalkani waxa la bilaabi doona marka aad dooran song aad rabto si uu u xaliyo faahfaahinta ay ka dibna u aqoonsadaan button. Sidoo Waxaad dooran kartaa kuwan raadkaygay badan. Markaas Waxaad bilaabi kartaa in la beddelo faahfaahin kuwan raadkaygay ', magaca artist iyo tiro intaasi ka badan. Photo 8: Tracks Doorashada Waxaad u Baahan go'an
Raadi iyo baabi'iyo kuwan raadkaygay labalaabka ama heeso. All inaad samayso waa iskaan playlist ama tareenka. Tani waxay sidoo kale kaa caawin karaan in qamaar dhowr tag ID3 u kuwan raadkaygay. Tubada 'DAR si tag ID3 lagu darayaa tareenka. Dooro wadada markaas ka jaftaa 'Mari' oo aad samaysay. Photo 9: Tracks u heli lahayd nuqul & Them Sixidda
Bilow sameeyo isbedelo ku saabsan track ama heesta. Waxaad magaca kara ama wax ka bedel song gaar ah. Sidoo kale, waxaad bedeli kartaa sawirka farshaxanka ee la mid kale ama aad ka mid noqon kara faahfaahin gaar ah ama fariin ku saabsan song gaar ah ama track. Haddii aad rabto in aad beddesho dabool ama sanam kaliya ka jaftaa 'Hel daboolida' iyo dhirta oo dooro mid ka mid ah aad rabto. Waa mid aad u fudud in la sameeyo tan, waxaad u baahan tahay oo dhan si ay u sameeyaan waa tuubada "Edit" oo markaas beddeli macluumaadka ugu badan ee aad u baahan tahay oo ku saabsan wadada ama song. Photo 10: ayeey ID3 kala duwan Fields Photo 11: darista daboolida / Images
Gunaanad - Soo afjaridda Afkaarta
Haddii aad raacdo tallaabooyinka kor ku xusan, waxaad ka heli doontaa in qamaar tag ID3 si toos ah oo aan wax complicating waa sida aad sida caadiga ah u malaynayaa. Marka si sax ah waa la fuliyay, in aad ku faraxsan tahay sida maktabadda music aad sidaas si fiican u diyaarin taas oo fudud si ay u maareeyaan tareenka doonaa. Wax macno ah ma habka aad u tagto, sababtoo ah mid ka mid iyaga ka mid ah si fiican u shaqeeyaan laakiin waxa ay lagama maarmaan ah si loo hubiyo in Tunesgo waa la jaan qaada telefoonka haddii aad go'aansato in aad u isticmaasho.
MSN Password Cracker: Sida loo crack / Hack MSN Password
Sida loo dayactir Error Msvbvm60.dll fudud oo dhakhso ah
Sida loo dayactir Error Blackra1n Asl.dll Kolkiiba
Waa maxay iyo Sida loo dayactir Error Mpr.dll
> Resource > Utility > Sida loo dayactir ID3 Tags tayo leh, Tracks Update 'Artist, Title, sifayn iwm